सामाजिक, भाइरल र भिडियो अभियान प्रयोग केस: मो को दक्षिण पश्चिम ग्रिल
Queso को लागि नाच
बिहीबार, अगस्ट 4, 2011 बिहीबार, अक्टुबर 27, 2011 Douglas Karr
मलाई थाहा छ मो को दक्षिण पश्चिम ग्रिल एक थियो नृत्य भिडियो प्रतियोगिता १०,००० डलर को लागी - मैले समर्पित गरेको हुन सक्छ डेस्कटप जाम भिडियो केवल तिनीहरूको लागि!
मलाई केहि कारणहरुका लागि यो अभियान मनपर्दछ। एजेन्सी ब्रान्ड मुभर कृत्रिम रूपमा मांग सिर्जना गर्नुपर्दैन ... उनीहरूले रणनीति सिर्जना गरे र उपभोक्ताहरूले काम गरे… उत्पादन, वितरण र प्रचार। यसले भिडियोको संयोजन गर्‍यो ... यस्तो मुख्य माध्यम ... र सामाजिक। यो सरल थियो। र सबै भन्दा धेरै - यो रमाईलो थियो। यी कठिन आर्थिक समयमा, हामी रमाइलो चाहन्छौं.
परिणाम कुञ्जी पनि छन्! केवल १132२ भिडियो सबमिशनको साथ, तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि अभियानले योजना गरे अनुसार गरेन। जे होस्, ती १132२ सबमिशनहरूको कारणले:
१154,252,२XNUMX२ साइट भ्रमण
१००० भिडियो हेराईहरू
२,2,947। Facebook फेसबुक सेयरहरू
आधा मिलियन उपभोक्ताहरूसम्म पुग्न मार्फत तिनीहरूको नेटवर्क सन्देश प्राप्त गर्न को एक यस्तो प्रभावी माध्यम हो। मोईको ब्रान्डमा प्रभाव ठूलो छ ... र म विश्वस्त छु कि यसले केही व्यक्तिहरूलाई ड्राइभ गर्न र केस्को खोज्नको लागि केही मानिसहरूलाई ड्राइभ गर्न सक्छ। Mmmm ... queso।
नृत्य तपाईंको क्योजो भिडियो प्रतियोगिताले हाम्रो पाहुनाहरूलाई मोको Queso प्रति आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्नको लागि एक रमाईलो र आकर्षक तरीका प्रदान ग .्यो। प्रशंसकहरू उनीहरूको मनपर्दो भिडियोहरू समर्थन गर्न सँगै भेला भएको हेर्न साँच्चिकै रमाईलो भयो किनभने यो वास्तविक भिडियो प्रविष्टिहरू हेर्ने थियो! आशा छ कि हाम्रा पाहुनाहरूले यति रमाईलो गरे जुन हामीले यस प्रतियोगितामा गर्‍यौं। लॉरेन म्याकगोवेन बाराश, मो को दक्षिण पश्चिम ग्रिल को लागी PR / कर्पोरेट संचार निर्देशक।
विजेता रोचेस्टर, न्यूयोर्कका जोन डायप थिए!
सामाजिक मिडिया र उद्यम
इन्फोग्राफिक्स किन प्रयोग गर्नुहुन्छ?
अगस्ट 5, 2011 मा 12: 23 AM
राम्रो! विजेता फेरिस बुएलर्स डे अफमा क्यामरन फ्राई जस्तो देखिन्छ।